आफ्नो जन्मदिनमा दर्शकलाई ‘तक्मे बुढा’ को उपहार ! • Gazzabko Online
Prem Pun || January 29, 2018 at 4:05 pm
हाँस्य कलाकार विल्सन विक्रम राई ‘तक्मे बुढा’को सोमबार जन्मदिन परेको छ । वि.सं २०३९ साल माघ १५ गते जन्मिएका ‘तक्मे बुढा’ नेपाली कला क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हाँस्य अभिनेता हुन् । तक्मे आजबाट ३४ वर्ष पुरा गरि ३५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । जन्मदिनमा गज्जबको अनलाईनसँगको सम्पर्क पछि उनीसँग छोटो कुराकानी संभव भयो । सोमबार दिउँसो कुराकानीका क्रममा उनले आफु भर्खरै बैङ्ककबाट ‘त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल’मा आइपुगेको बताए। साथै आफ्नो ब्यस्त दैनिकीलाई सम्हाल्दै तत्काल डोमेस्टिक विमानबाट पोखरा हुँदै सुटिङका लागि धम्पुस जाने योजना सुनाए । जन्मदिनको लागि औपचारिक कुनै पनि कार्यक्रम नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
जन्मदिनमा सर्वप्रथम उनलाई घरबाट बहिनी र बुवाले जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । आफ्ना लागि जन्मदिन विशेष हुने भए पनि जन्मदिन पनि दर्शकहरुकै मनोरञ्जनका लागि समर्पित गर्ने गरेको कुरा सुनाए । यो अवसरमा उनलाई धेरै कलाकार तथा प्रशंसकहरुले पनि शुभकामना दिएका छन् । र उनले भने आफ्ना प्रशंसकहरुका लागि नयाँ उपहार दिएका छन् । उनले फेसबुकमा करिब एक प्याराग्राफ लामो स्टाट्स सहित एक भिडियोको लिंक शेयर गरेका छन् । जस्लाई उनले आफ्नो जन्मदिनमा दर्शकहरुका लागि कोशेली भएको लेखेका छन् । हेरौँ, तक्मेले दर्शकहरुलाई दिएको जन्मदिको उपहार।
को हुन् तक्मे बुढा ?
झापामा जन्मिएर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका तक्मेले कलाकार बन्नलाई लामो समय संघर्ष गरे । सानै देखि कलाकार बन्ने तिव्र ईच्छा बोकेर काठमाडौँ छिरेका उनले आफ्नो सपना पुरा गर्न कयौँ फिल्ममा प्राविधिकको काम पनि गरेका छन् । साथै उनले हालका चर्चित नायक नायिकालाई छाता ओढाउने काम पनि गरेका थिए । फिल्ममा देखिन कै लागि उनले धेरै फिल्ममा स–साना भूमिका पनि गरेका थिए । केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’सँगको भेटपछि ‘माग्ने बुढा’ले उनलाई मेरी बास्सैमा लिए । ‘मेरी बास्सै’मा ‘तक्मे बुढा’को पात्र निर्वाह गरेपछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्किएर हेनु परेन् । र हालसम्म पनि ब्यस्त छन् । उनको डेब्यु फिल्म ‘शायद’ थियो । ‘शायद’बाट निर्वाह गरेको भूमिकाले उनी झनै लोकप्रिय भए । ‘शायद’बाट उनले सह अभिनेताको अवार्ड पनि जिते । ‘मेरी बास्सै’ पछी उनले माग्ने बुढासँग मिलेर ‘खासखुस’ टेलिसिरियल पनि ल्याए । जो दर्शकहरुले अत्यन्तै मन पराए । ‘तक्मे’ले ‘मेला’, ‘त्यान्द्रो’, ‘सकश’, ‘रोमियो’, ‘वडा नंम्बर ६’, ‘ए मेरो हजुर २’, ‘नेपथ्य’, ‘फेसबुक’, ‘रिदम’, ‘अर्धकट्टी’, ‘प्रोड्युसर’ लगायत दर्जन बढी फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । त्यस्तै आफैले निर्माण गरेको फिल्म ‘रातो घर’ले पनि राम्रो ब्यापार गर्यो । नेपाली फिल्म हुँदै बलिउडमा पनि पाईला राखेका उनले बलिउडमा आयशा टाकियासँग मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जुन रिलिजको तयारीमा छ ।